दारुसारु, पैसावैसा सब मिलाउने म भन्दै जब मध्य रातमा डा. सशांक विरूद्ध उनकै पिए तिवारी जाइलागे - Darpanpost
» पत्र-पत्रिका » प्रमुख समाचार अंक: 14397
दारुसारु, पैसावैसा सब मिलाउने म भन्दै जब मध्य रातमा डा. सशांक विरूद्ध उनकै पिए तिवारी जाइलागे
‘नेशनल इन्टरनेशनल मिलाउने म । दारुसारु पैसावैसा सब मिलाउनु पर्ने मैले । अनि, कोइरालाहरुको इशारामा मलाई वाइपास गर्ने ?’ शुरुमा त ‘दिल्ली भन्दा जाडो’ भन्दै एउटै स्कच पिउँदै थिए सशांक कोइराला । तर, पछि कुरा चर्कदै जाँदा भरत तिवारी यसरी रन्किएकी ‘तँ’ ‘मा…’ ‘मू’ जस्ता शब्द बर्सिन थाले । अशोक कोइराला, सुरज उप्रेतीहरु त्यहीं थिए । ‘होइन, होइन’ भन्दै तान्दै थिए, तर भरत चाहिँ हात तन्काएर ‘के खोजेको ?’ भन्दै सशांकतिर सोझिन थाले ।
यसरी झगडा पर्यो महाराजगंजस्थित कोइराला निवासमा । जनवरीको ११ तारिख, पुसको २७ गते राती पौने २ बजेको कुरा हो । ‘वीपी कोइरालाका छोरा मध्ये जेठा श्री हर्ष र माइला ‘प्रकाश’ बिग्रिए, कान्छा ‘सशांक’को भर छ भनेको त्यो पनि शेरबहादुरको पुच्छर लागेर सकिने भयो’ भन्ने गुनासो थियो, विराटनगरिया कोइरालाहरुको । यही कुरा दिल्लीबाट फर्केकै साँझ दारुसँग निस्किएपछि पिए भरत अकस्मात तात्तिँदा स्थिति त्यस्तो भएको हो । उनी तात्तिनुको कारण थियो, कोइरालाहरुले केही समयदेखि चलाएको प्रत्येक ‘भातभेला’ मा सशांकलाई अरु कोइरालाले भन्ने कुरा एउटै हुने, ‘पिए गलत भयो । कि पिए छोड कि परिवार छोड !’
दिल्लीबाट फर्किएको दिन यस्ता कुरा उठ्यो र सशांकले ‘यो कुराले मलाई भयंकर प्रेसर छ यार’ मात्रै भनेका थिए । अनी रन्किने पालो भरतको शुरु भयो ।
खासमा सशांकलाई शेरबहादुर कहाँ लगेर फसाउने देखि कोइरालाको पक्षमा काम नगर्नुमा भरतको हात छ भन्ने कोइरालाहरुको आरोप थियो । त्यसमाथि दिल्ली जानु अघि सुजाताकहाँ खाना खाँदा सशांकले हस्पिटल मालिकसँग पैसा उठाएको, गिलमेरी रक्सीको साहु कर्मा छिरिङ, कान्तिपुर फाइनान्सका सिबी लामालाई टिकट बेचेको, सोलुमा प्रकाश कार्कीसँग पैसा लिएर समानुपातिकको टिकट दिएको, सिन्धुपाल्चोकमा विकास लामासँग पनि त्यस्तै गरेको जस्ता गुनासो आएपछि कोइराला खान्दानकै बेइज्यत भएको प्रसंग निस्किएको थियो ।
सशांकले टिकट दिएको स्विकारे, तर पैसा चाहिँ नलिएको बताए । ‘मलाई किन चाहियो पैसा ? भरतले गरेको भए थाहा भएन !’ भनेका थिए । यसो मृदुला कोइराला, अतुल कोइराला, शुशिल कोइरालाको भाउजु, किरण कोइराला, सञ्जय गौतम, संखुवासभाका दीपक खड्काहरु पनि सँगै थिए । शायद, त्यहिँ भएमध्येका कसैले भरतलाई यो कुरा सुनाएको हुनुपर्छ । २७ गते झगडा परेपछि ८–१० दिन भरत सशांककहाँ गएका थिएनन् । तर, केही दिन अघि धनुषामा मोहनबहादुर परियारको चौरासी, सिन्धुली ग्वाल्टारमा सहिद बाबुराम बरालको शालिक अनावरणका कार्यक्रममा भने सशांकले आफैंले बोलाएर लगे । भरत पहिले ३६ से समुहका हुन् । पार्टी विभाजन हुँदा प्रजातान्त्रिकतर्फ थिए । ०६४ मा सशांकले नवलपरासीबाट चुनाब जितेपछि त्यहाँका पार्टी सभापति महेन्द्रध्वज जिसीको सिफारिसमा उनी पिए बनाइएका हुन् ।
भरतको सशांकसँग मिल्ने कुरा खानपिन देखि घुमघामसम्मका छन् । त्यसैले धार फरक भएपनि कुरा मिल्यो । त्यसमाथि सशांक भर्खर डाक्टरी पेशा छाडेर राजनीतिमा छिरेका । पोलिटिकल अपडेट गराउने मान्छेपनि चाहिएको बेला थियो । हुँदाहुँदा उनै भरतले सशांकलाई शेरबहादुरको पक्षमा काम गर्ने नै बनाए ।
१३ औं महाधिवेशनमा दुई ‘एस’ लाई भोट हाल्ने भनेर अर्जुननरसिंह हराउनमा उनको मुख्य भूमिका भनी आलोचित छन् । सशांकले आज सम्म देउवाको प्रतिकूल हुने कुनै काम कुरा गरेका छैनन् । त्यस्तो भएपछि कोइरालाको अस्तित्वनै समाप्त हुने भयो भनेर शेखरको पिए दिनेश र सुजाताका पिए लक्ष्मण थपलियाले खाना खाने नाममा कोइराला विच हार्दिकताको विकास गर्ने उपाय निकाले ।
पहिलो कार्यक्रम सुजाता कहाँ भन्ने सशांकलाई लक्ष्मणले गरे । तर, भरतले ‘हैन किन मण्डिखाटार जाने टोखा मै बोलाऔं, हामी नै खुवाउँछौं’ भनेर सशांकलाई उचाले । फलतः टोखामा तीन कोइराला भेला भए । तीन कोइराला मध्ये सशांक र सुजाता एकापसमा एकअर्कालाई नेता मान्न तयार छैनन् । यी दुबैले शेखरलाई मात्र मान्ने । अबको राजनीतिमा शेखर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने घरायसी बैठक भयो ।
यसको छटपटाहट भरतलाई हुने नै भयो । अब कुरा बिग्रिने भयो भनेर देउबालाई आफुपछि सशांकलाई पार्टीं सभापति बनाउने बचन दिन लगाए । खानाको योजनामा शेखरलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भनेका कारण सुजातासँग सशांकको रिस थियो । दोस्रो खाना भेला एक हप्तापछि भनेको ४५ दिनपछि भयो । फेरी अर्को हप्ता भने, तर सशांकले सुजातालाई बोलाएनन् । शेखरले असन्तुष्ठी जनाए । त्यसपछि सुजाता कहाँ नै जमघट भयो । फेरि सुजातालाई नबोलाउलान् भनेर कल्याण गुरुङसहित अर्को खाना त्यहिँ खाने कार्यक्रम बन्यो ।
पुस दोस्रो साता सशांक र भरत दिल्ली गए । मोदीसँग भेट्नका लागि प्रयास गरे । मोदीले चुनाब अघि नभेट्ने खबर पठाएपछि एपोलो अस्पतालमा दुवैले स्वास्थ्य जाँच गराए । अस्पतालमै हुँदा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट्नका लागि समय मिलाउन भरत निकै लागे । तर, उनले पनि भेट दिएनन् । तर, यता फर्केर मोदीको निम्तोमा गएको भन्न भ्याए ।